आफ्नो उमेर अनुसार कति हुनु पर्छ त शरिरको तौल ? जानकारी लिनुहोस – सुदूरखबर डटकम
आफ्नो उमेर अनुसार कति हुनु पर्छ त शरिरको तौल ? जानकारी लिनुहोस
काठमाडौं– स्वस्थ रहन उमेर अनुसार तौल हुनुपर्छ । विशेष गरी जन्मदादेखि १८ बर्षसम्मको मानिसमा शारीरिक तौलको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कुन उमेरका मानिसको तौल औशत कति हुँदा राम्रो हुन्छ ?
१६. जब छोराको उमेर १४ बर्षको हुन्छ तब फेरी छोराको सारीरिक वृद्धि/बिकास तिब्र बन्दा उसको तौल बढेर ४७ केजीको हुन्छ तब छोरीको तौल ४८ केजीको हुन्छ ।
१७. अब १६ बर्षे जवानी सुरु हुन्छ तब सारीरिक रुपमा छोरा-छोरी दुवैको औशत स्वस्थ सरिरको तौल छोरा भए ५८ केजीसम्मको र छोरी भए ५३ केजीको हुन्छ । छोरा सारिरिक रुपमा सशक्त बन्ने हुँदा उसको तौल पनि स्वभाविक रुपमा १४ देखि १८ बर्षको उमेरमा ह्वात्तै बढ्छ । छोरीको तौल भने स्थिर पनि रहन सक्छ ।
यहाँ हामीले १८ बर्षसम्मको उमेरमा हुने औशत तौल बारे जानकारी दियौं । नेपालीहरुको १८ बर्षदेखि माथि ४० बर्षसम्मको औशत तौल ६० देखि ८५ सम्म हुनु स्वस्थनै मानिन्छ ।
कसैको सारीरिक बनौट अनुसार तौल बढी हुनु अस्वस्थ भन्न मिल्दैन तर अस्वभाविक मोटाउनु, पेट लागेर तौल बढ्नु, हिड्दा वा कुनै काम गर्दा छिटो थाक्नु जस्ता अवस्थामा अस्वस्थता हुन सक्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा खानपान र ब्यायाममा ध्यान दिनुनै उपयुक्त हुन्छ
४० बर्षदेखि ६० बर्षसम्मको उमेरमा पनि स्थिर तौल हुनुपर्छ । तर त्यसपछि भने तौल क्रमश घट्दै जान्छ । बुढेसकालमा पनि नियमित ब्यायाम र खानपानमा ध्यान दिने हो भने स्वस्थ भइन्छ । तर उमेर अनुसार रोगसँग लड्ने शक्ति र सारीरिक शक्तिमा समेत ह्रास आउने हुँदा स्वभाविक रुपमा तौल घट्दै जान्छ ।